Thomas Dekker dia mamely ny volamena mampatahotra ara-tsaina miaraka amin'i "Jack mody" - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Thomas Dekker dia mamely ny volamena mampatahotra ara-tsaina miaraka amin'i "Jack mody"
Thomas Dekker dia mamely ny volamena mampatahotra ara-tsaina miaraka amin'i "Jack mody"
by Waylon Jordan Oktobra 12, 2016
by Waylon Jordan Oktobra 12, 2016 577 hevitra
Nody i Jack toa ny lohatenin'ny hatsikana tantaram-pitiavana na tantara an-tsehatra tsara momba ny dian'ny lehilahy niverina tany amin'ny fotony hitadiavana ny tenany. Rehefa tonga any izy, dia hahita vondron'olona iray tia azy ary maniry hikolokolo ny nofinofiny ary hanampy azy ho endrika tsara indrindra amin'ny tenany mety hahatongavany. Iray amin'ireo horonantsary mamela anao hahatsapa fifaliana sy fahafaham-po rehefa mihodina ny mari-pankasitrahana.
Izany dia TSY ilay horonantsary noforonin'i Thomas Dekker. Fa kosa, toy ny sisa amin'ity sangan'asa manimba ara-tsaina ity, dia lozabe ilay lohateny.
Rehefa misokatra ny horonantsary, Jack Thurlowe (Rory Culkin) dia mandeha amin'ny andavanandrom-piainany rehefa nahazo antso an-tariby izy. Ny ray aman-dreniny dia tratry ny lozam-pifamoivoizana. Novonoina ny rainy, fa ny reniny (nilalao an'i Lin Shaye tsy manan-tsahala), na eo aza ny dona sy mangana dia mbola velona ihany. Handeha mody any amin'ny reniny izy tsy ho ela ary hikarakara ny fandevenana ny rainy. Io no fotoana nanombohan'ny fahasahirany.
Ity manaraka ity dia dia fandehanana miadana miadana mankany taloha satria nifanatrika tamina zava-nitranga hatramin'ny fahazazany i Jack izay efa ela no nofehezina. Rehefa manomboka manafika ny zava-misy ny nofy ratsy azy dia mihodina tsy ho voafehy ny tontolony.
Culkin dia manome fampisehoana mamirapiratra toy ny Jack, manta ary marefo rehefa miposaka ny sainy. Ny fanambarana tsirairay izay tonga dia manova azy ary ny mpihetsiketsika dia manoratra izay miova amin'ny vatany iray manontolo. Tsy azoko antoka fa nahita an'i Culkin nanome fampisehoana tsaratsara kokoa aho. Ny azoko antoka rehefa avy nijery an'ity horonantsary ity dia ny ahafahantsika manantena azy handray ny andraikitra matetika amin'ny ho avy. Tsy hoe manan-talenta be fotsiny izy, fa manana izany fahaizana voajanahary mitaona ny mpihaino azy hanaraka ny hetsika rehetra ataony amin'ny efijery.
Ary avy eo, ao i Lin Shaye. Shaye no Meryl Streep an'ny tontolon'ny horohoro ary manaporofo izy fa mbola hery iray horaisina amin'ny anjara asan'ny Teresa, renin'i Jack izy. Indray mandeha dia reny marefo sy be fitiavana izy ary amin'ny manaraka dia mangotraka noho ny hatezerana sy herisetra. Ny fomba anaovany an'izany amin'ny fomba mora sy mora toa izany dia mistery toa ilay vehivavy lalaoviny.
Dekker dia mamelatra ny mpilalao miaraka amina mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika manan-talenta. Daveigh Chase (aka Samara in The Ring) mamirapiratra amin'ny andraikitry ny sakaizan'i Jack indrindra, ary i Louis Hunter dia mifofofofo ho mpifanila vodirindrina eo akaikin'i Jack izay mety manana antony manosika ratsy na tsia. Jereo akaiky dia ho hitanao ao koa i Nikki Reed hariva franchise sy ny asany farany Betsy Ross ao amin'ny Fox's Sleepy Hollow.
Saingy ho tonga zava-poana izany talenta rehetra izany raha tsy nisy asa mahavariana ao ambadika. Ny script sy ny torolàlana an'i Dekker dia mitazona hatrany ny mpihaino, tsy manolotra fototra mafy orina hijoroany. Izy dia mamindra antsika amin'ny fomba madiodio amin'ny zava-misy ka miverimberina toy ny sombin-kazo amin'ny sifotra. Ny fampihorohoroana amin'ny sarimihetsika dia tena izy, ary ny ratsy indrindra dia tsy azo ihodivirana izy.
Miaraka amin'ny isa mampatahotra an'i Ceiri Torjussen sy ny cinematography kanto an'i Austin F. Schmidt, sarimihetsika iray tsy tianao halahelo ity.
Nody i Jack famoahana amin'ny sinema sy amin'ny VOD 14 Oktobra 2016 avy amin'ny Momentum Pictures. Zahao ny lisitry ny toerana misy anao ary jereo ity sarimihetsika ASAP ity! Ity sarimihetsika ity dia coaster roller iray mampihetsi-po izay tena mendrika tokoa.